Maxay dibad baxyada Iran kaga duwanyihiin kuwii waayadii hore? - BBC News Somali
Maxay dibad baxyada Iran kaga duwanyihiin kuwii waayadii hore?
22 Nofembar 2019
Image caption Boqol qof oo bannaan baxaya iyo saddex askari ayaa mudaharaadyadii u dambeeyey ku dhintay
Dhacdo 15 Noofember ku bilaabantay mudaharaadyo taxane ah oo lagaga cabanayo sicirka shidaalkii kordhay, ayaa si degdeg ah isugu rogtay dardar lagu doonayo in taliska la rido.
Dalka gabigiisaba waxay dadku isugu soo baxeen dariiqyada oo ay ka bilaabeen mudaharaadyo lagaga soo horjeedo hogaamiyaha sare ee oo ay ku tilmaameen kelidii taliye.
Iran: "waxaa na soo weeraray cadow xun"
Lix maalmood oo mudaharaaddo rabshado wataa ka socdeen tobaneeyo magaalo oo dalka ku yaal - inkasta oo gebi ahaan ba internet-ka la jaray- ayaa waxay ku gabogaboobeen dhimashada 106 qof oo la dilay, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay iyo hay'adda Amenesty International in kasta oo ay xogo kale tibaaxeen in dhimashadu aad uga badan karto intaa.
Iran may xaqiijin tirada dadka wax ku noqday, waxaanay ku eedaysay "qas wadeyaal" ku xidhan cadow shisheeye ahi in ay mudaharaadada wadeen.
Dibad baxyadan dambe maxaa u gaara?
Sida ay khabiir BBC ka tirsan oo arimaha Iran ku xeel dheeri sheegay, dibad baxyadan dambe waxa u gaarka ahi waxa weeyi "qalaasaha ba'an, boobka baahay iyo gacabta birta ah ee ay xukuumaddu kala hor tagtay".
Judhiiba dadka lafa gura siyaasadda gobolku waxay sheegeen in amarka xukuumaddu bixisay ahaa "naxariis ayaan la tusin oo sida ugu dhakhsaha badan mudaharaadada ha loo joojiyo, dadka wax yeelloobayna waxa dheer kumaanka kun ee qof ee la xidhay
Khubaradu waxa kale oo ay farta ku fiiqeen xaqiiqada ah in mudaharaadadan haatan dhacayaa aanay ku koobnayn Tehran laakiin ay ku fideen dalka oo magaalooyin door ah uu ka socdo.
Sidoo kale waxa la moodaa in "aanay hogaan lahayn oo markii ugu horraysay markii ugu horraysayna sannadihii u dambeeyey ay ka qayb galayso dabaqada dhexe ee bulshadu".
Yaa bannaan baxaya?
"Dhibaabooyin badanoo dhaqaale ayaa na haysta. hilibkii waa qaali, digaagii waa qaali, beedkii xataa waa qaali.... imikana shidaalkii baa ku biiray" ayay tidhi haweenay mudaharaadaysay oo BBC-da la hadashay. "
Ma cuna qabateynta Mareykanka ayaa sameeysay Iran?
Qaramada Midoobey oo walaac ka muujisay dhibaatada Iraan
Khabiirka BBC-da ee Iran ayaa isna aragtidaa ku raacsan oo yidhi "cadhada sicir bararka ayaa ah awoodda ugu weyn ee hurinaysa mudaharaadyada". And the BBC expert agrees: "frustration was the driving force behind these protests".
Iran waxa saarraa culays weyn oo dhaqaale tan iyo markii Maraykanku cunoqabatayntii ku soo celiyey 2018.
Sicir bararku wuxu marayaa 40% shaqo la'aantu qiyaastii waa 15%.
Xiisadda ka dhex aloosan qoomiyadaha laga tirada badan yahay iyo xukuumadda dhexe ayaa iyadna sidoo kale sii hurisay xasilooni darrada waana qoomiyado damacsan in ay Iran ka go'aan.
Internet-ka la jaray
Lahaanshaha sawirka Netblocks
Khabiirka BBC-du wuxu sheegay in internet-ka oo go'naa ilaa Sabtidii ayaa sii adkeeyey in xog buuxda laga helao baaxadda mudaharaadada iyo saamaynta qabqabashadii booliska.
Laakiin Madyar Saminejad oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegay in baadhis ay sameeyeen muujisay in "qulqulatooyin lagu dhintay ay ka socoto Iran oo ilaa haatan ku galaafay ugu yaraan 106 qof 21 magaalo".
Maxaa xiga ee Iran laga dhawri karaa?
Isla markii mudaharaadadu bilaabmeen ba, dawladu waxay iyaduna taageerayaasheeda u dirtay in ay dariiqyada isugu soo baxaan.
Madaxweyne Ruuxaani ayaa yidhi "arintani waxay muujinaysaa in cadowgayagii waxan laba sannadood iyo dheeraadka maleegayey uu jabay."
Ilaa haatan ma cadda cidda ka dambaysa qalalaasaha, walow madaxweynuhu ku eedeeyey "xubno curyaamin wada" oo Maraykanka, Israel iyo Sucuudigu taageerayaan.
Warbaahinta dawladda Iran ayaa tabisay in wax kastaa haatan caadigii ku soo noqdeen, laakiin wararka ka imanaya gudaha dalku waxay tibaaxayaan in aanay haba yaraateen joogsan dibad baxyadu.
Waliba iyada oo dhaqaaluhu sii hoobanayo, cadhada dadku waayadaa demi mayso.